Ny fironana miloko sy ny tabilao fanovana loko | Famoronana an-tserasera
Ny fironana miloko sy ny tabilao fanovana loko
Fran Marin | | Graphic Design, General
Isan-taona dia nandinika ny fivoaran'ny loko izahay ary mbola niandry ela be talohan'ny faminaniana nataon'i Pantone, saingy Hatraiza ny maha-zava-dehibe ireo fironana ireo ary inona no fiantraikany eo amin'ny asa aman-draharahantsika ihany fa amin'ny fiaraha-monina misy antsika?
Isika rehetra izay miasa eo amin'ny tontolon'ny sary dia mahalala mialoha fa ny lokony dia tena mampiorina ny fitondran-tena sy ny fomba fijerin'ny olombelona, ​​fa hatraiza?
1 Inona ireo fironana miloko ary iza no tompon'andraikitra amin'ny famaritana azy ireo?
2 Ny maha-zava-dehibe ny vinavinan'ny volo sy ny fironana
3 Tabilao fiovam-po Chromatika
4 Ny fironana miloko taloha ... ary ankehitriny
Inona ireo fironana miloko ary iza no tompon'andraikitra amin'ny famaritana azy ireo?
Ireo matihanina amin'ny sehatry ny fikarohana loko, ny tsenan-doko, ny dokam-barotra sy ny varotra, ary koa ireo tafiditra amin'ny famolavolana sary, ny lamaody, ny haingon-trano anatiny ary ny endrika indostrialy, dia misafidy ary ahazo ny marimaritra iraisana momba izay loko hahomby sy ho lamaody amin'ireto taona. Ity faminaniana momba ny loko ity dia nadika ho "fironana loko." Miaraka amin'ireo famantarana ara-toekarena sy ara-kolotsaina ankehitriny ny tsena ara-barotra, ny fifampiraharahana momba ny vokatra, ny fidiram-bola mediana ary ny ambaratongam-piarahamonina, ny fanapaha-kevitra momba ny fironana miloko dia mifototra amin'ny fitsirihana ara-tsaina ny fampiasana loko. Ny safidy loko dia zava-dehibe indrindra amin'ny varotra antsinjarany, vokatra ary serivisy rehetra. Amin'ny firenena indostrialy rehetra, ny loko dia orinasa lehibe.
Ny fisafidianana ny loko izay miteraka fanovana eo amin'ny tsenan'ny mpanjifa dia sehatra iray manokana. ny Fikambanana ho an'ny torolàlana momba ny loko iraisam-pirenena, dia iray amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fametrahana fironana loko izay hisy fiatraikany amin'ny indostria maro an'isa. Ny IACD dia mitarika fihaonambe iraisam-pirenena sy atrikasa hahazoana antoka fa marina amin'ny fanarahana ny fironana miloko azo vinavinaina. Ny sandan'ny marketing an'ny IACD, ny Color Marketing Group, dia miandry mialoha ny telo taona, manome fotoana betsaka hanatanterahana ny famolavolana sy ny fanamboarana ireo vokatra indostrialy manan-danja amin'ny loko vaovao sy farany. Fikambanana faharoa, ny American Color Association, manokana amin'ny faminavina loko ho an'ny lamaody, ny endrika anatiny, ary ny indostrian'ny tontolo iainana. Ny tontonana misy ny manam-pahaizana momba ny loko valo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo dia mivory isan-taona mba hamaritana ny fiantraikan'ny fironana ankehitriny. Ny fironana miloko dia mifamatotra akaiky amin'ny toekarena ary vokatr'izany dia misy fiantraikany amin'ny paikadin'ny varotra sy ny dokam-barotra isaky ny misy loko na loko vaovao eo amin'ny tsena manerantany. Ny fironana miloko dia lasa ampahany amin'ny voambolana haino aman-jery, mandefa hafatra miloko an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fahitalavitra sy mpanonta.
Rehefa mahazo aina ny mpanjifa amin'ny loko amin'ny fiainana andavan'andro, mpandalina mitady fitambarana loko vaovao sy manaitaitra kokoa handrisihana ny fihetsem-pon'izy ireo sy ny filàna ilaina. Matetika izy io dia adika hoe "zava-baovao" na "lamaody." Ny volavolan-doko mifanaraka amin'ny indostria iray dia mety tsy ho mahafinaritra na mety amin'ny iray hafa. Mba hanonerana izany sy hitehirizana ny maha-marina ny safidy, ireo mpandinika loko dia hanao tolo-kevitra mifanitsy na manokana amin'ny lamaody, indostria, na fampiasana anatiny.
Ny maha-zava-dehibe ny vinavinan'ny volo sy ny fironana
Misy fiatraikany amin'ny indostria an'arivony ny fiovan'ny loko, ary misy akony amin'ny mpanakanto, mpanao asa tanana, mpanamboatra, mpamatsy, mpivarotra ary serivisy fanampiana, manomboka amin'ny latabatra fanaovana sary sy solosaina ka hatrany amin'ny trano na any am-piasana. Ny loko na loko vaovao dia mamelona fiainana vaovao ho lasa vokatra taloha. Izy io koa dia manome fiainana indostrialy antoka maro tompon'andraikitra amin'ny fampidirana ny hafanam-po farany amin'ny lamaody. Ny toekarena eran'izao tontolo izao dia miankina amin'ny fahaveloman'ny vokatra ary koa ny mampitaha azy, raha toa ka amidy tsara ny vokatra dia azo antoka fa ny vinavina amin'ny loko, ary noho izany ny fironana miloko, dia nandray anjara lehibe taminy ary mety namaritra ny loko fironana nandritra ny folo taona.
Tabilao fiovam-po Chromatika
Ny tabilao fanovana loko dia fitaovana iray lehibe hiasa amin'ny loko. Satria misy maodelim-loko samihafa, mila fantarintsika ataovy ny fiovam-po hiasa amin'ny marina sy ny marina indrindra. Ilaina ny fiovam-po raha tsy mifanaraka ny maodelim-loko (ohatra, rehefa aseho amin'ny monitor RGB ny loko CMYK na rehefa misy antontan-taratasy misy sary ao amin'ny habaka miloko RGB alefa amin'ny mpanonta).
Na dia ho hitantsika tsara kokoa aza izany amin'ny lahatsoratra ho avy izao, dia mamela anao ohatra iray aho:
Ny fironana miloko taloha ... ary ankehitriny
Amin'ny ankapobeny, ny lokon'ny pastel amin'ny loko maitso, manga ary volomboasary, nalaza nandritra ny am-polony taona maro tamin'ny ankamaroan'ny vokatra anatiny, dia nanome loko marevaka sy loko mafana sy marevaka. Ny tints maivana sy antonony dia nosoloina aloky ny mena sy mavo mazava tsara, ary ny volony safira sy ametystanta toy ny vatosoa. Ireo alokaloka ireo dia hita matetika amin'ny vokatra natao ho an'ny sehatra manankarena, toy ny akanjo fety sy lamba lafo vidy ho an'ny trano. Izy ireo dia mitaona ny harena sy ny fanavahana ny kolontsaina. Lasa ny volon'ondry mainty be pitsiny taloha. Izy ireo dia nosoloina metaly volamena sy varahina nirehitra, natambatra niaraka tamin'ny loko mena midorehitra an'ny burgundy, terra cotta ary harafesina. Ny loko malaza ankehitriny sy mandritra ny taona maro ho avy dia tsy pastel tsy fantatra intsony, fa ny lokon'ny magenta, turquoise ary volamena. Ampiasaina amin'ny vokatra vita amina ao anaty trano ary amin'ny lamaody izy ireo. Marina ny milaza fa mena sy maitso ary manga feno tototra sy maizina, mafana ary marevaka toy ny burgundy, green hunter ary navy, no safidy matanjaka amin'ny ho avy.
Ilay Mena Mampientanentana ny fitafiana, kojakoja ary entana lafo vidy, ary ankafizin'ny lahy sy ny vavy.
Ireo maitso mavana Ny alokaloka lalina dia hampiasaina lantom-bolo manan-danja amin'ny lamaody, atitany tsy miankina ary toerana misy orinasa.
Ny manga manga ary ny terracotta mafana dia ho hita ao amin'ny trano fisakafoanana sy toerana be ho an'ny daholobe. Nomena hazavana fotsy mamirapiratra mifanohitra, na volomboasary mavo mamy, ireo loko ireo dia miteraka fahatsaram-panahy mafana sy manatsara ny toerana anatiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny fironana miloko sy ny tabilao fanovana loko
Fifanarahana modely fototra ho an'ny mpamorona sary
Famoronana mahatalanjona 10 hankalazana ny Andro Origami